Tallaalka Sputnik V COVID-19 ayaa loo oggolaaday in si degdeg ah loogu isticmaalo Indonesia
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Indho Indho Indoneesiya » Tallaalka Sputnik V COVID-19 ayaa loo oggolaaday in si degdeg ah loogu isticmaalo Indonesia
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Indho Indho Indoneesiya • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Wararka Ruushka • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Madaxa Wakaaladda Xakamaynta Daroogada iyo Cuntada ee Qaranka Indonesia Penny Lukito
"Wakaaladda Qaranka ee Daroogada iyo Cuntadu waxay oggolaatay tallaal kale oo coronavirus ah, Sputnik V, Talaadadii, Ogosto 24," ayaa lagu yiri bayaan maanta lagu daabacay mareegaha Wakaaladda Qaranka ee Xakamaynta Daroogada iyo Cuntada.
Indonesia ayaa oggolaatay tallaalka coronavirus-ka ee Ruushku sameeyay.
Dib -u -eegis qoto dheer ee dawada ayaa la fuliyay.
Indonesia ayaa ilaa hadda diiwaangelisay in ka badan 4,000,000 kiis oo COVID-19 ah.
Wakaaladda Qaranka ee Xakamaynta Daroogada iyo Cuntada ee Indonesia ayaa Arbacadii ku dhawaaqday in tallaalka coronavirus-ka Sputnik V ee Ruushku sameeyay loo oggolaaday in si degdeg ah looga isticmaalo waddanka.
“Wakaaladda Qaranka ee Daroogada iyo Cuntadu waxay oggolaatay tallaal kale oo coronavirus ah, Sputnik V, Talaadadii, Ogosto 24,” ayaa lagu yiri bayaan maanta lagu daabacay mareegaha internetka ee dalka Wakaaladda Qaranka ee Xakamaynta Daroogada iyo Cuntada akhriyo.
Madaxa hay'adda Penny Lukito ayaa sheegtay in dib u eegis dhab ah lagu sameeyay dawada. Waxay intaas ku dartay in waxtarka Sputnik V uu gaaray 91.6%.
Sanduuqa Maalgashiga Tooska ah ee Ruushka (RDIF), ayaa isna sheegay in Indonesia ay tahay waddankii 70aad ee ansixiyay Sputnik V. Tirada guud ee dalalka oggolaaday tallaalka Ruushka ayaa ah afar bilyan, oo ka dhigan 50% dadka adduunka.
"Indonesia waa mid ka mid ah ummadaha ugu badan Aasiya iyo ku darista Sputnik V ee faylalka tallaalka qaranka ayaa bixin doonta adeegsiga mid ka mid ah tallaallada ugu nabdoon uguna waxtarka badan adduunka," ayuu yiri agaasimaha RDIF.
Indonesia ayaa ilaa hadda diiwaangelisay in ka badan afar milyan oo kiisaska coronavirus ah, in ka badan 128,000 oo dhimasho ah iyo ilaa 3.6 milyan oo soo kabasho ah. Mas'uuliyiinta dalka ayaa hore u oggolaaday adeegsiga tallaallada coronavirus oo ay soo saareen Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, Moderna iyo Pfizer.